(सन् १९८१ अगस्त २० मा शिखरबाली गाउँ, बारुइपुर, पश्चिम बंगालमा जन्मिएका नित्यानन्द गायेन समकालीन प्रगतिवादी हिन्दी कविता लेखनको क्षेत्रमा एउटा स्थापित नाम हो । साहित्य, पत्रकारिता र सामाजिक, साँस्कृतिक आन्दोलनमा समान ढंंगले क्रियाशील गायेनका हालसम्म अपने हिस्सेका प्रेम(२०११), तुम्हारा कवि(२०१८) र इस तरह ढह जाता है एक देश(२०१८) तीनवटा कविता संग्रह र वहस नही संवाद(२०१८) एक साक्षात्कार संग्रह गरी चार पुस्तकहरु प्रकाशित छन् । जीवनका संवेदना र जमिनको धरातलसँग जोडिएका उनका कविताहरु नेपाली, अँग्रेजी, मलयालम, मैथिली र फ्रांसेली भाषामा अनुदित र प्रकाशित भैसकेका छन् । उनीसँग साहित्य र लेखनसँग केन्द्रित रही प्रमोद धितालले गरेको कुराकानी)
नित्यानन्द जी, सबैभन्दा पहिला हाम्रा पाठकहरुलाई यो बताइदिनुस कि आजभोलि के गर्दैहुनुुहुन्छ ?
प्रमोद जी, तपाईंको यो प्रश्नको जबाफ दिंदै गर्दा मलाई कवि रमाशंकर यादव ‘विद्रोही’ लाई सम्झिरहेको छु । कवि विद्रोहीले भनेका थिए–“कविता एउटा कर्म हो, जो म गरिरहेको छु ।” फेरि पनि मानिस सोध्छन्–“विद्रोही तिमी के गर्छौ ?”
कविता नै कविको कर्म हो । म आजभोलि पनि कविता लेख्दैछु । कवि कविताबाट टाढा रहन सक्दैन । कविता केबल शब्दहरुसँग खेल्नु होइन । कविता जिम्मेवारी हो । एउटा कवि एक्टिविस्ट पनि हुन्छ । त्यसैले ऊ सामाजिक र जन आन्दोलनहरुबाट पनि अलग रहन सक्दैन । आजभोलि भारतमा राजनीतिक माहोलको कारण जनआन्दोलनहरु तीव्र भएका छन् । किन कि कविताको साथै मेरो सम्बन्ध पत्रकारितासँग पनि छ । यसैले आजभोलि म तमाम जनआन्दोलनमा शामिल भएर तिनको रिपोर्टिङ पनि गर्दछु ।
विधाको हिसाबले तपाईंलाई हामी कविको रुपमा जान्दछौं । कविता लेखनतिर कसरी आउनुभयो ? शुरुवाती पृष्ठभूमी बताइदिनुहुन्छ की ?
मेरो जन्म भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा भयो । भारतमा बंगाललाई कविको उर्वर भूमि पनि मानिन्छ । किनकि कवि रवीन्द्रनाथ, सुकुमार राय, नजरुल इस्लाम, शरतचंद्र आदि अनेकौं कवि–लेखकहरुको सम्बन्ध बंगालसँग छ । यसैले आज पनि संगीत, कला र साहित्यको क्षेत्रमा बंगालको अलग्गै पहिचान छ । बंगालको हरेक घरमा विहानदेखि लिएर साँझसम्म कुनै पनि समय तपाईं रवीन्द्र संगीत या नजरुल गीत सुन्न सक्नुुहुन्छ । त्यहाँ धार्मिक र सामाजिक उत्सव होस् या कुनै राजनीतिक या सामाजिक आन्दोलन तिनीहरुमा पनि कविता र गीतहरुलाई गाइन्छ–बजाइन्छ । जसको असर त्यहाँका बच्चाहरुमा बचपन देखि नै पर्न थाल्छ । हो, यसको अर्थ यो होइन कि वहाँ हरेक घरमा कवि, चित्रकार या संगीतकार पैदा हुन्छन् । किन्तु यो पक्का हो कि त्यस वातावरणको कारण बंगालीहरुमा साहित्य–कला र संगीतको राम्रो रुचि र बुझाई हुन्छ । केहि त्यस्तो मसँग पनि भयो शायद । जब म कक्षा चारमा पुगें, त्यही समयमा मेरा पिताको मृत्यु भयो र हामी आमाको साथमा राजधानी दिल्ली आयौं । दिल्ली आएपछि मेरी आमालाई जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा केहि काम भेटियो र हामी त्यही रहन थाल्यौं । जब दिल्ली आएँ, त्यतिखेर मलाई हिन्दी आउदैनथ्यो । जब मेरो यहाँ विद्यालयमा भर्ना भयो त्यसपछि हिन्दी पढ्दै हिन्दीका कवि र लेखकहरुलाई चिन्न थालें । फेरि थाहा भयो कि हिन्दीका कैयौं ठूला लेखकहरु, कवि समालोचकहरु यही क्याम्पसमा बस्दछन् र उनीहरुसँग भेट्न कैयौं ठूला कवि–लेखकहरु त्यहाँ आउँछन् । कवि केदारनाथ सिंह, आलोचक नामवर सिंह, कथाकार नासिरा शर्मा जस्ता लेखक जे.एन.यू. मे बस्दथे ।
तर त्यस समयमा म सानो थिएँ र पढाईको साथै मलाई घरको काम पनि गर्नु पथ्र्यो । मलाई आफ्ना भाइ बहिनीहरुको स्कूलको लागि तयार गर्नुपथ्र्यो, खाना बनाउनुपथ्र्यो, कोठाको सरसफाई गर्नुपथ्र्यो ।
ठूलो भएर के बनूँला या गरुँला केहि सोच्ने फूर्सद नै मिलेन त्यो समयमा । बचपन देखि नै पढ्ने आदत भने बसिसकेको थियो मेरो । म घण्टौं पढ्ने गर्थें । पाचौं कक्षाससम्म त हमेशा प्रथम भएँ स्कूलमा र मलाई मेधावी छात्रवृत्ति मिल्थ्यो । जब कक्षा आठमा थिएँ तब पहिलोपटक कवि नागार्जुनलाई आँखा अगाडि देखें । उनी जे.एन.यू. आएका थिए । जे.एन.यू.का पर्खालहरुमा पाश, ब्रेख्त, मुक्तिबोध, गोरख पाण्डेय र नागार्जुन का कविताहरुका पंक्ति लेखिएका हुन्थे । यो सब म यसकारण बताइरहेको छु, किनकि मलाई यो लाग्छ कि यी सबै परिस्थितिहरुको योगदान अवश्य रहेको छ मेरो कवित्वको निर्माणमा ।
बाह्र कक्षामा जब पढ्दैथिएँ तब मलाई लाग्यो कि म लेख्न सक्छु । तर म कवि, पत्रकार बन्नेछु यो सोचेको थिएन । र स्कूलपछि मनोविज्ञान को पढाईलाई अगाडि बढाउन चाहन्थें । एघार–बाह्रमा यो मेरो विषय पनि थियो । तर यस्तो भएन । म दिल्ली विश्वविद्यालयबाट बि.ए.को पढाई अगाढि बढाउन थालें । यसै दौरान मैले सामाजिक र राजनीतिक मुद्धाहरुमाथि लेख्न सुरु गरें । यतिमात्र होइन त्यसलाई छपाउनको लागि चौध किलोमिटर साइकल चलाएर भोगल बाट निस्किने एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयसम्म जान्थें । त्यस पत्रिकाको सम्पादक मेरो एक स्कूले सहपाठीका बाबू थिए । यसरी लेखन प्रारम्भ भयो । बी.ए. पूरा गर्दासम्म त्यस पत्रिकामा मेरा कैयन लेख छापिसकेका थिए । यो सिलसिला जारी रह्यो र बीए पश्चात कैयौं अरु साना–साना पत्रिकाहरुमा मेरा लेख छापिदै गरे । त्यही दौरान कविता लेखन आरम्भ भयो । किन्तु कुनै साहित्यिक पत्रिकामा मैले कविता पठाएन । मैले केबल सादा पानामा लेख्थें र एउटा फाइलमा राखिदिन्थें । फेरि जब मैले मानवाधिकार विषमा एम.ए.गरिहेकोे थिएँ, त्यो समयसम्म मेरो फाइलमा धेरै कविताहरु जम्मा भैसकेका थिए । एम.ए. फाइनल परीक्षा पछि लेखक विष्णुचन्द्र शर्माको पत्रिका ‘सर्वनाम’ पढेर मैले उनलाई फोन गरेको थिएँ । उनले मलाई आफ्नो घर बोलाए भेट्को लागि र सँगसँगै सोधे–“तिमी के गछौं ?” मैले धेरै संकोचका साथ भनेको थिए–“मानवाधिकार विषयको पढाई गर्दैछु, अगाडि यही विषयमा सोध गर्न चाहन्छु ।” उनले अगाडि सोधे–“केहि लेख्छौ पनि ?” मैले जवाफमा भनें–“हजुर, अलि अलि लेख्छु ।” त्यसपछि विष्णुजीले भन्नुभयो–“जे लेख्छौ लिएर आउनू ।” फेरि केहि दिनपछाडि म विष्णु जी सँग भेट्न गएँ आफ्नो फाइलको साथमा । उनले धेरै स्नेहसँग मेरो उत्साह बढाउँदै भन्नुभयो–“अफ्नो संघर्षलाई पहिचान गर, आफ्नो दुःखसँग लड्न सिक र लेखिराख ।” फेरि वहाँले भन्नुभयो–“आफ्नो एउटा कविता तिमी मलाई देऊ ‘सर्वनाम’को आउँदो अंकको लागि ।” यसरी मेरो कविता ‘गेंद हूँ’ शीर्षक बाट पहिलो कविताको रुपमा ‘सर्वनाम’को ८० औं अंकमा प्रकाशित भयो ।
यसरी विष्णुचन्द्र शर्माजीले मलाई हिंदी कविताको दुनियामा लिएर आउनुभयो । सर्वनाममा पहिलो कविता छापिएपछि कैयौं अरु साहित्यिक पत्रिकाहरुमा मेरा रचनाहरु प्रकाशित हुनथाले र मानिसहरु मलाई कविको रुपमा चिन्न थाले । त्यसपछि मेरो पहिलो कविता संग्रह ‘अपने हिस्से का प्रेम’ पनि विष्णु जीले सन् २०११मा ‘सर्वनाम’ को १००औं अंकसँगै प्रकाशित गराइदिनुभयो । फेरि कवि, कथाकार र संपादक अनवर सुहैलजीले आफ्नो पत्रिका ‘संकेत’ को एउटा अंक मेरा कविताहरुमाथि केन्द्रित गरेर प्रकाशित गर्नुभयो । यस अंकको धेरै चर्चा भयो र यसरी म हिन्दी कवितामा आएँ ।
के कविता सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरणको औजार बन्न सक्छ ?
बिल्कुल बन्न सक्छ । तपाईं दुनियाका तमाम महान क्रान्तिहरुको इतिहास उठाएर हेर्नुहोस्, पाउनुहुनेछ कि क्रान्तिभन्दा पहिला क्रान्तिको तयारीमा जो आन्दोलनहरु भए उनमा कविता र कविहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । चाहे महान रुसी क्रान्ति होस् या फेरि भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन, हरेक ठाउँ कविताको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । यो साँचो हो कि कविता आफै कुनै क्रान्ति या आन्दोलन उठाउन सक्दैन तर साँचो यो पनि हो कि हर आन्दोलनमा कवि र कविताको भूमिका अहं हुन्छ । एक शशक्त वैचारिक कविताले मानिसहरुको विचारलाई प्रभावित गर्न सक्छ । उनको सोंच र दृष्टिकोणलाई बदल्न सक्छ ।
हामी प्रत्येक जनआन्दोलनमा देख्छौंं कि दुनियाभरिका महान कविहरु कविताका पंक्तिहरु जुलूस र जनसभाहरुमा लगाईएका हुन्छन् । यदि म भारतको सन्दर्भमा भनौं भने यहाँ आज जति आन्दोलनहरु चलिरहेका हुन्छन् ती सबैमा कविता एउटा महत्वपूर्ण औजार हो । मुक्तिबोध, पाश, नागार्जुन, गोरख पाण्डेय आदि कविहरुका कविताहरुको साथै समकालीन भारतीय कविहरुका प्रतिरोधी कविताहरु यी आन्दोलनहरुमा आज पनि प्रयोग भइरहेका छन् ।
लेखक प्रायः आफ्नो भनाई र लेखनमा सुन्दर र सुन्दरताको चर्चा गर्दछन् । तपाईंको विचारमा सुन्दरता के हो ? र यो कवितामा कसरी व्यक्त हुन्छ ?
पहिलो कुरा यो थाहा पाउनु छ कि सुन्दरता के हो ? के सुन्दरताको कुनै एउटा निर्धारित सार्वभौमिक परिभाषा छ ? सुन्दरतालाई हेर्ने हरेक व्यक्तिको आफ्नो एउटा दृष्टि हुन्छ । ऊ आफ्नो हिसाबले सुन्दरतालाई गढ्छ र पढ्छ । तर केहि चिजहरु प्राकृतिक हिसाबले सुन्दर हुन्छन् । जस्तो कि एउटा फूल, सूर्यास्तको समय क्षितिजमा फेलिएका रंगहरुको आफ्नो सुन्दरता हुन्छ । त्यसैगरि सागरमा डुब्दै गरेको सूर्य र विहानको आकाश हामीलाई सुन्दर लाग्छ । तर यदि कोही जन्मदेखि नै नेत्रहीन छ भने ऊ यी सुन्दरताहरुको अनुभव गर्न पाउँदैन । तर ऊ कुनै पक्षीको आवाज र मधुर संगीको सुन्दरतालाई राम्रोसँग महसूस गर्नसक्छ । त्योभन्दा धेरै उसको लागि कुनै स्पर्शको महसूस सबैभन्दा सुन्दर हुनसक्छ । व्यक्ति जो आँखाहरुले देख्छ त्यो सुन्दरता सबको लागि एक समान हुँदैन । हरेक व्यक्ति आफ्नो हिसाबले त्यस सुन्दरतालाई देख्दछ र अनुभव गर्दछ । अनुभव जति गहिरो हुन्छ अभिव्यक्ति त्यति नै कठीन हुनपुग्छ । ‘गूंगे का मीठा आम‘ सुनेको हुनुपर्छ तपार्ईंले शरीर र अनुहारको सुन्दरता स्थायी हुँदैन । महसुस, अनुभव र प्रेमको सुन्दरता स्थाई हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि कवि या व्यक्ति कुनै पनि सुन्दरतालाई जति महसूस र अनुभव गर्नसक्छ त्यसलाई नै अभिव्यक्त गर्ने कोशिश गर्छ । यो अभिव्यक्ति कविको शब्दकोष मा निर्भर गर्दछ । यस दुनियामा प्रेमभन्दा सुन्दर केहि पनि छैन । के प्रेमको सुन्दरतालाई अभिव्यक्त गर्नु सजिलो काम हो कसैको लागि ?
यस दुनियामा छालाको रंगको आधारमा घृणा फैलाउने गरिन्छ । भेदभाव गरिन्छ । यस्तोमा सवाल छ कि के कालो रंगको आफ्नो सुन्दरता हुँदैन ? यदि यस्तो हुन्थ्यो भने कालो रंगका मानिससँग कोही पनि प्रेम गर्दैनथ्यो । यसैले मेरो बुझाई छ कि हरेक व्यक्ति आफ्नो विवेकले सुन्दरतलाई मापन गर्छ र महसूस गर्छ । व्यक्तिको मन र विचार जसरी सुन्दर हुँदै जान्छ उसरी नै सुन्दरताको विस्तार हुँदै जान्छ ।
तपाईंं कविता कुन परिस्थितिमा लेख्नुुहुन्छ र लेखन प्रक्रिया के हो ?
म जबर्जस्ती कविता लेख्ने प्रयास गर्दिन, यदि कहिल्यै गर्छु त लेख्न सक्दिन । माथि सुन्दरताको सवालमा जो मैले भनें यहाँ पनि केहि यस्तै हुनेगर्छ । मनुष्यमा प्रेम, घृणा, उदासी, विद्रोह आदि विकास र विस्तार उसको अनुभवको आधारमा हुनेगर्छ । म बिना महसूस या अनुभव बिना केहि पनि लेख्न सक्दिन । मलाई लेख्नको लागि एकांत चाहिन्छ । मेरा जति पनि कविता तपाईंले पढ्नुभएको छ ती सबैमा यो कुराको महसूस गर्न सक्नुहुन्छ । स्टेफेन हकिङ कवि होइन एउटा महान अन्तरिक्ष वैज्ञानिक थिए । उनले ब्रम्हण्डका बारेमा जनि लेखे त्यो सबै उनको सोध थियो । के कल्पनाको बलमा कुनै कवि आफ्नो कवितामा यो सबै भन्न सक्छ ? सक्दैन ।
वरिष्ठ कवि लेखक विष्णुचन्द्र शर्मा आफ्ना हर पत्र र कुराकानीहरुमा मसँग भन्नुहुन्छ–‘आफ्नो दुःखसँग लड्न सिक ।’ कविको काम दुःखसँग भाग्नु होइन, बरु त्योसँग लडेर जिउनु हो । तब मात्र ऊ आफ्ना पाठकहरुलाई जीवनको महत्व बुझाउन सक्छ । जीवन संघर्षको पक्रियाबाट गुज्रिदैगर्दा नै म केहि लेख्न सक्छु या तपाईं यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो संघर्ष र अनुभव म मार्फत लेखिन्छ ।
के सुन्दर विचार भएर मात्र सुन्दर कविता बन्न सक्छ ?
यसको जवाफ मैले माथि दिइसकेको छु । सुन्दर विचारलाई निजी या सर्वजनिक जीवनको व्यवहारमा ल्याएर असल मानिस बन्न सकिन्छ । तर कुन विचार सुन्दर हो कुन होइन यो हरेक व्यक्ति र वर्ग आफ्नो हिसाबले तय गर्छ । उदाहरणको रुपमा यदि हामी समाज र मनुष्यताको भलाईको लागि तानाशाही र अधिनायकत्ववादी सत्ताको विरोधमा जनविद्रोहको विचार व्यक्त ग¥यौं भने के सत्ता पक्ष त्यसलाई सुन्दर विचार मान्न तयार होला ? सुन्दर कविताको कुनै निर्धारित परिभाषा छैन । हरेक कविलाई आफ्नो कविता सुन्दर लाग्छ । तर सुन्दर कविता त्यही हुन्छ जुन पाठकलाई सुन्दर लाग्छ । पाठकहरुको पनि आ–फ्नो सौन्दर्यवोध हुन्छ । विरह, पीडा, उदासी र क्रान्तिको बारेमा लेखिएका अनेक सुन्र कविताहरु छन् । यस्तोमा पाठक–आलोचक कविताहरुको आकलन र विश्लेषण आ–आफ्नो अनुसार गर्छन् । किन्तु रचनाकार आफ्नो रचनालाई त सुन्दर नै मानेर चल्छ । सुन्दर विचारको साथ यदि कविको शब्दकोष वृहत छ र अभिव्यक्तिको शैले पनी सुन्दर छ अनि जसले आम पाठकहरुलाई प्रभावित गर्नसक्छ भने कविता सुन्दर हुन्छ ।
वर्तमान समग्र साहित्य लेखन र प्रगतिशील लेखनको अवस्थालाई तपाईं कसरी हेर्नुुहुन्छ ?
तपाईंलाई थाहा नै छ कि अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघको स्थापना १९३५ मा लंडनमा भयो । यसका प्रणेता सज्जाद जहीर थिए । यसमा मुल्कराज आनंदको पनि अहं भूमिका थियो । जब यसको स्थापना भयो त्यतिखेर यसको नाम थियो अल इण्डिया प्रोग्रेसिव राइटर्स फ्रंट । यसको पहिलो भारतीय अधिवेशन ९ अप्रिल १९३६ मा लखनउमा भयो । यो लेखक समूह आफ्नो लेखन बाट सामाजिक समानताको समर्थन गथ्र्यो र कुरीति, अन्याय र पिछडापनको विरोध गथ्र्यो । प्रलेसमा प्रेमचन्दको भूमिकालाई कोही पनि भुल्न सक्दैन । यस संगठनको एउटा गौरवशाली इतिहास छ । तर आज तमाम लेखक संगठन जुन प्रकारका विवादहरुमा फस्छन् त्यो सबै सुन्दा र देख्दा दुःख लाग्छ । यसैले म यी संगठनहरुको बारेमा केहि भन्न चाहन्न । जहाँसम्म वर्तमान लेखन र लेखकको सवाल छ मलाई लाग्छ कि आजका लेखकहरुमा आत्ममुग्धता धेरै बढेको छ । लेखक संगठनहरुभित्र र बाहिर लेखकहरुका अलग–अलग गुटहरु बनेका छन् । केहि लेखकहरुलाई छोडेर बाकी लेखकहरुले जनआन्दोलनसँग आफ्नो नाता तोडिसकेका छन् । अधिकतर लेखकहरुको लेखनबाट शोषित, पीडित र सर्वहारा वर्गको पीडा र संघर्ष गायब भैसकेको छ । केहिले सत्ताको प्रति आफ्नो वफादारी निर्वाह गर्दै तानाशाही सत्ताको विरोधमा मौनता साधेका छन् । यी सबै कमीहरु हिन्दी साहित्यमा सबैभन्दा धेरै आएका छन् । यदि तपाईंलाई याद छ भने कन्नड लेखक कलबुर्गीको हत्यापछाडि भारतका धेरै लेखकहरुले विरोध गर्दै साहित्य एकेडेमीलाई आफ्नो पुरस्कार फिर्र्ता गरेका थिए । ती लेखकहरुलाई भारतको सत्ता र त्यससँग जोडिएका मानिस ‘अवार्ड फिर्ता ग्यांग’ भनेर सम्बोधन गर्छन् ।
तपाईंको लेखनको राजनीति के हो ?
यस प्रश्नको उत्तर मेले धेरै हदसम्म पहिले नै दिइसकेको छु । म अक्सर मुक्तिबोधलाई याद गर्दै आफै प्रश्न गर्छु–‘पार्टनर मेरो पलिटिक्स के हो ?’
जवाफ आउँछ–मेरो पलिटिक्स शोषित, दमित र सर्वहारा वर्गको हो । जल, जंगल र जमीनबाट विस्थापित गरिएका आदिवासीहको पक्षमा मेरो राजनीति हो ।
तपाईंको साहित्यिक जीवनमा सबैभन्द धेरै प्रभाव कुन–कुन लेखकहरुको छ ?
प्रेमचन्द, नागार्जुन, निराला, ब्रेख्त, टाल्सटाय , लू शून, रुसो, मंटो, नाजिम हिकमत, पाब्लो नेरुदा, नजरुल, विष्णुचन्द्र शर्मा, गोरख पाण्डेय, आदम गोंडवी, रमाशंकर यादव ‘विद्रोही’ जस्ता अनेक नामहरु छन् ।
वर्तमान भारतीय युवा लेखक कविहरुको कम्जोरी र सबलताहरु के हुन् ?
म साहित्यको एउटा पाठक हूँ । यसैले तपाईंको यस प्रश्नको जवाफ कोही विद्वान आलोचकले दिन सक्छ । म केबल यत्ति भन्न सक्छु कि धेरै नयाँ लेखकहरुको उभार आएको छ र उनीहरुमध्य धेरैेले राम्रो लेखिरहेका छन् ।
के तपार्ई कुनै संगठन र अभियानसँग जोडिनुभएको छ ?
म कुनै लेखक संगठनको सदस्य छैन । तर म हरेक वाम र जनआन्दोलनमा शामेल हुने कोशिश र समर्थन गर्दछु । यी दिनहरुमा दिल्लीमा जति पनि जनआन्दोलन भए चाहे ती किसान मजदूर आन्दोलन होउन्, जल, जंगल र जमीनको अधिकारलाई लिएर आदिवासीहरुका आन्दोलन होउन या फेरि शिक्षाका अधिकारहरुलाई लिएर विद्यार्थीहरुको आन्दोलन या पत्रकारहरुमाथि भैरहेका हमलाहरुको विरुद्ध कुनै आन्दोलन होस् सबैमा सक्रिय रुपले शामेल भएको छु ।
नेपाल र भारत छिमकी मुलुक हुन् । दुबै देशहरुको जनस्तरमा सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ छ । यसको बाबजुद पनि भारतीय सत्ताप्रति नेपाली जनता ससंकित रहन्छन् । यसको कारण के हुनसक्छ ?
तपाईंले एउटा धेरै अहं मुद्धाको उठान गर्नुभयो । नेपाल र भारत दुई धेरै महत्वपूर्ण छिमेकी देश हुन् । हाम्रो साँस्कृतिक सम्बन्ध पनि धेरै मजबूत छ । यसको बाबजूद नेपालका जनताहरुको मनमा भारतीय सत्ताप्रति जुन सन्देहको चर्चा गर्नुभयो त्यसको लागि नयाँ दिल्ली र काठमाडौमा बसेका राजनेता जिम्मेवार छन् । एउटा कुरा यहाँ स्पष्ट भनिदिऊँ कि नेपाली जनताहरुको संदेह भारतप्रति होइन बरु भारतीय सत्ताप्रति हो ।
दुबै देशका आम जनतामा एक अर्काप्रति कुनै संदेह या नफरत छैन । तर भारत क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा ठूलो र शक्तिशाली छ तथा नेपालका सीमाहरु तीनतिरबाट भारतले घेरिएका छन । यसकारण भारतको सत्ता हमेशा नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने कोशिश गर्छ । जयपुर समानान्तर साहित्य उत्सवमा भारत–नेपाल कवि संवादमा यो विषयमा तपाईंले जुन कुराहरु उठाउनुभएको थियो त्यही सत्य हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनद्वारा नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तीपछि गणतन्त्रको स्थापना र संविधानको नेपालको साथै भारतीय उपमहाद्वीपको लागि एक महान घटना हो । किन्तु जसलाई म र तपाईं महान भनिरहेका छौं जरुरी छैन कि सबै त्यससँग सहमत होउन् ।
नेपालको नयाँ संविधानको निर्माणमा जसरी भारतले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास ग¥यो र जब उसको केहि लागेन त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा ट्रकहरुलाई रोकेर महिनौंसम्म नेपालको सप्लाई रोकियो । यो नेपाली जनताको साथ एउटा ठूलो धोखा थियो । यसैगरि यहाँका फिल्महरुमा चौकिदारहरुको रुपमा नेपालीहरुलाई देखाइन्छ जब कि भारतीय सेनामा सयकडौं नेपाली युवाहरु छन् । यतिखेर म यत्ति भन्न सक्छु कि दुई देशका आम जनताहरुमा एकअर्काप्रति कुनै संदेह या द्वेष छैन ।
नेपाली जनताको मनमा जो संदेह छ त्यसको लागि काठमाडौ र नयाँ दिल्ली जिम्मेवार छन् कुनै पनि देशद्वारा कुने पनि अर्को देशलाई उसको आकारको आधारमा सानो र कम्जोर मानेर उसको स्वतन्त्रता र सम्प्रभूताको अपमान गर्नुहुँदैन । हर देशको समान सम्मान हुन जरुरी छ ।
भारतमा क्रियाशील जनपक्षीय मानिने राजनीतिक र वौद्धिक संगठनहरुम विद्यमान आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने सबभन्दा ठूलो समस्या के देख्नुहुन्छ ?
सवाल गम्भिर छ । मेरो जो बुझाई छ त्यसले यो भन्दछ कि यस्ता संगठनहरुको समस्या हो–घमण्ड, आत्ममुग्धता, गुटबन्दी र सत्ताको नजिक जाने लालसा ।
हामी विपर्यास र विरोधाभाषले भरिएको समयमा बाँचिरहेका छौं । एकातिर प्रतिक्रियावादी ताकतहरु उपस्थित छन् र अर्कोतिर क्रान्तिको नाउँमा क्रान्तिको कारोबार पनि मौलाइरहेको छ । हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ? ता कि टाढासम्म बिना ढुलमूल पुग्नसकौं ।
यो एउटा धेरै आवश्यक मुद्धा उठाउनुभयो तपाईंले । यसको जवाफ यो हुनसक्छ कि सबैभन्दा पहिले यिनको पहिचान गरेर जनताको सामु यिनीहरुको बेनकाम गर्ने काम । यिनीहरुको कुनै पनि छलछामबाट आफूलाई बचाएर राख्नु र आफ्नो मार्ग स्वयम् तय गर्नु । एउटा कुरा त एकिन छ कि छद्म रुपमा कोही पनि धेरै दिनसम्म छिपेर बस्न सक्दैन । एक न एक दिन उसको सच्चाई बाहिर आइ हाल्छ । हाम्रो काम यस्तो होस् कि मानिसहरुसम्म प्रभावकारी ढंगले सच्चाईलाई लिएर जान सकियोस् । यसको अलावा अर्को कुनै बाटो छैन ।
उपभोक्तवादको रजाई चलिरहको यस सयममा हाम्रो सचेत प्रयत्न के हुनुपर्छ जसले हाम्रो युवा पीढीको चेतनालाई अगाडि बढाउन सकोस् ।
यो एक वैश्विक र जटिल समस्या हो हाम्रो समयको । आज युवा पीढीको ठूलो हिस्साले क्लासिक या क्रान्तिकारी साहित्य पढ्न छोडिदिएको छ । पूंजीवादी शक्तिहरुलाई पनि यस्तै जमातको जरुरी छ, जसले प्रश्न नगरोस् । आज दुनियाभरिका तमाम सत्ताहरु पूँजीवादद्वारा नियन्त्रित हुन्छन् । लेनिन, स्टालिन र माओत्सेतुङ आदिका साहित्य पढ्नेहरुलाई नक्सलवादी करार गरिन्छ । उनीहरुलाई विकासविरोधी भनिन्छ । सस्ता इन्टरनेट र मोबाइलको यस युगमा गलत सन्देश फैलाउनु धेरै सजिलो भएको छ । भारतमा बितेका दिनहरुमा सोशल मिडिया र व्हाट्स एपको माध्यमबाट गलत र भडकाउ सन्देश फैलाएको कारण हिंसाका धेरै घटनाहरु भएका छन् । उपभोक्तावादले मानिसहरुको सोच्ने शक्तिलाई धेरै नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । उपभोक्तावादको कारण नै दुनिया भरिमा गरीब जनता र किसान–मजदूरको शोषण पनि तीव्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा युवा पीढीको लागि चिंतित हुनु स्वाभाविक हो । यसबाट बच्ने उपाय यही हो कि तमाम डिजिटल माध्यमहरु अन्तर्गत युवा पीढीसम्म सही ज्ञानको प्रचार गरियोस् । राम्रो साहित्य प्रति उनको रुचि बढाउने काम गरियोस् । उनीहरुसँग सम्वाद गरियोस् । तर यस काममा अभिभावक र स्कूलको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरुको सहयोग बिना यो धेरै कठिन हुन्छ ।
तपाईलाई जीवन अनुभवबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलो शिक्षा कुन हो ?
आफ्ना दुःखहरुसँग लड्नु र संघर्ष गरेर जिउनु नै जीवन हो । कठिनाईहरुसँग हारेर आफ्ना प्रतिज्ञा र विचारहरुको विरुद्धमाा गएर सम्झौता गर्नु कम्जोरी हो ।
केही सन्देश जो नेपाली पाठकहरुलाई दिन चाहनुहुन्छ ?
नेपाल एउटा सुन्दर देश हो । नेपालमा मेरा धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ । नेपालका धेरै कविहरुलाई मैले पढें र वहाँहरुबाट प्रभावित पनि भएको छु । नेपाली कवि र पाठकहरुसँग मलाई जोड्नमा ‘समकालीन तीसरी दुनिया’ पत्रिकाको अहं भूमिका रहेको छ । त्यस पत्रिकाको माध्यमबाट मैले नेपालका कविहरुलाई पढें, थाहा पाएँ र यसै पत्रिकाको माध्यमबाट म वहाँका पाठकहरसम्म पनि पुगें । म नेपाललाई माया गर्छु र त्यहाँका आफ्ना साथीहरुप्रति अभार र प्रेम प्रकट गर्दछु ।कुराकानीको लागि तपार्ईंलाई धेरै धन्यवाद ! म धेरै खुशी छु तथा यो मैत्रीपूर्ण संवादको लागि म पनि तपाईं र नेपालका तमाम साथीहरुप्रति आभारी छु । र आशा गर्दछु सम्वादको यो सिलसिला अगाडि पनि यसैगरि जारी रहनेछ ।